Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed oo lagu qabtay kulan dhexmaray Ganacsato iyo Dhkhaatiir Soomaaliyeed |
Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed oo lagu qabtay kulan dhexmaray Ganacsato iyo Dhkhaatiir Soomaaliyeed
Axad, November 17, 2013 — Kulan ka dhacay Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed ayaa lagu soo dhaweeyay dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo isaga yimid gudaha iyo dibadda dalka. Agaasimaha Rugta Ganacsiga, Cabdi Abshir Dhoore ayaa kulankaas ku soo bandhigay wax-qabadka Rugta muddadii yarayd ee dib loo aasaasay.
Kulankaas oo lagu la-faguray isbedelka ka socda dalka iyo baahida loo qabo in dhakhaatiirta iyo ganacsatadu ay iska kaalmeeystaan sidii loo heli lahaa daaweyn tayo leh oo raqiis ah. Iyadoo la isla gartay in taasi ay ku imaan karto in ganacsatada Soomaaliyeed ay maal-gashadaan mashaariicda caafimaadka dalka, kulana midoobaan aqoontooda.
Sidoo kale, waxaa la qiray inaysan tahay in lasoo gabagabeeyo dadka dibada xanuunada loogu qaadayo, taasoo ay qireen dhakhaatiirta iyo ganacsatada ay dhowr jeer dhacdooyinka noocaas ah la kulmeen.
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga, C/kariin Maxamuud Gabayre oo hadal ka jeediyay kulanka ayaa kula dardaarmay dhakhaatiirta Soomaaliyeed sidii mashaariic caafimaadka loo maalgelin lahaa, loona soo baandhigi lahaa si ganacsatadu ay maal-gelin ugu sameeyso qalabyada waaweyn ee ay looga baahan yahay dalka.
Dhanka kale, Gabeyre ayaa sheegay in taasi ay soo afjari karto in dibadda loo qaado qofka bukaanka ah, isagoo xusay in dad badan ay geeriyoodaan inta aan la gaarsiin dalkii caafimaad ahaanta loogu qaaday ama iyagoo sugaya.
Ugu dambeyn, dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo iyaguna meesha ka hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin kulanka, ayna soo dhaweynayaan gabi ahaan talooyinkii kasoo baxay waxaana dhakhaatiirtii kulanka ka qaybgalay ka mid ahaa: Dr. Khaliif Bille, Dr. Dalmar iyo Dr. C/risaaq.